फोटो खिच्ने क्रममा चिप्लिएर बडीगाड खोलामा खसेर तमानकी एक युवती वेपत्ता ! – ebaglung.com
फोटो खिच्ने क्रममा चिप्लिएर बडीगाड खोलामा खसेर तमानकी एक युवती वेपत्ता !
२०७६ आश्विन २०, सोमबार ०७:५१	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
खेमराज अर्याल, बुर्तिबाङ २०७६ असोज २० । बडीगाड खोलाले बगाउँदा एक महिला वेपत्ता भएकी छन् । तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ४ लाम्मेला घर भइ हाल काठमाडौ बस्दै आएकी घनदेवी भनेर चिनिने अन्दाजी ३२ वर्षीय देबी शिर्पालीलाइ बुर्तिबाङको निर्माणाधीन लक्ष्मीकुण्ड घाट पुलदेखी करिब ३० मिटर तल खोलाको ठुलो ढुंगामा उभिएर फोटो खिच्ने क्रममा चिप्लिएर खोलामा खसेपछी उनलाइ खोलाले बगाएको हो ।
अर्जेन्टिनाका नागरिक mateo candiaलाइ आफ्नो गाउँ पनि घुमाउने र घरमा बाबाआमा सँगै दशै मनाउन भनेर घर जादै गर्दा उनिहरु हिजो बुर्तिबाङ बसेका थिए । सेल्फि लिँदै गर्दा ढुँगाबाट चिप्लिएपछि उनलाई नदीले बगाएका कारण घटना घटेलगत्तै निरन्तर खोजीकार्य भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङका प्रमुख सुरज खड्काले बताए । घटनाको बिषयमा बुज्नका निम्ती प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
खोलाले बगाएको थाहापाए लगत्तै प्रहरी र स्थानियले खोजी कार्य जारी राखेपनि शिर्पालीको सब फेला परेको छैन । शिपार्लीलाइ खसेको ठाउँबाट करीब ४ सय मिटर तल रिभरहेड सम्म खोलाले बगाउँदै लगेको स्थानियले देखेको बताएका छन् तर दिनभर प्रहरी र स्थानियले खोजी गर्दा पनि शब फेला परेको छैन ।
लोपुन्मुख अवस्था रहेको संस्कृति संरक्षण गर्नु युवा भुमिका महत्वपुर्ण